Yini I-imeyili Spam? Amathiphu Awusizo Okuvela Ku-Semalt On Indlela Yokugcina Ama-imeyili Asemqoka Ngaphandle Kwesifolda Sokugaxekile
Igaxekile ye-imeyli, ebizwa ngokuthi i-imeyili engenamsoco, imilayezo eningi engaceliwe noma imibhalo ithumela nge-imeyili yakho. Eqinisweni, abakwa-spammers basebenzisa le nqubo ukusakaza i-malware nama-virus ku-intanethi. Cishe bonke abasebenzisi be-imeyili babhekene nale nkinga nsuku zonke ngoba ama-ID wabo we-imeyili atholakala ngama-spambots. Bengeza ngokuzenzakalelayo amakheli akho e-imeyili ohlwini lwabo futhi baqhubeke bethumela imiyalezo engenamsebenzi - clearance womens church hats. Abakwa-Spammers basebenzisa lezi bots ngokudala uhlu lokusabalalisa lwe-imeyili ngenani elikhulu. Ngesikhathi i-spam ye-imeyli yegama ebizwa okokuqala kuma-imeyili angafuneki ekhulwini le-19, yazuza ukuqashelwa kabanzi ngekhulu lama-20 lapho ukufinyelela kwe-intanethi kuvela khona ngaphandle kwezingcwaningo kanye nemigomo yezifundo. Lapha, uMichael Brown, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwemakhasimende, wabelane ngezeluleko ezithile zokugcina ama-imeyili abalulekile avela kwifolda yogaxekile.
1. Sebenzisa Imishini Yokuthengisa Imvume:
Inqubo yokuThengiswa kwemvume iyasetshenziswa kabanzi ngamabhizinisi amakhulu kanye nezinkampani zomhlaba wonke. Lokho abakwenzayo ukuthi bafaka ama-plugin athile abasiza ukuvimbela ama-imeyili abo okuphuthumayo futhi afanelekile ukuya kwifolda yogaxekile. Ku-WordPress, kunezinhlobo eziningi zama-plugin afanayo ukuze zizuze kuwo, kodwa i-plugin emangalisayo kakhulu futhi evelele yi-plugin ye-Whitelist. Kulula ukufaka futhi ivuselelwe ngokushesha.
2. Sebenzisa abahloli bokugaxekile ngaphambi kokuthumela noma ukuthola ama-imeyili:
Ngaphambi kokuba uthumele noma uthole i-imeyili, kufanele usebenzise abahloli be-spam abakhethekile, abahlala benamathele kuma-ID wakho we-imeyili nokusiza ukukhomba ama-imeyili asemthethweni nabangemthetho. I-SpamAssassin iyithuluzi elikhulu ukuqala ngalo. Uma ufuna ukugwema ukulanda isofthiwe noma ukuvula okunamathiselwe okungenalusizo nge-imeyili, ungafaka lolu hlelo okwamanje. Ngaphandle kwalokho, ungazama isevisi ye-IsNotSpam, esiza ukuhlola izinto ezibalulekile kuwe futhi uhlunga ama-imeyili angasho lutho kuwe.
2. Hamba ama-Blacklists:
Uma amaseva we-imeyli engabalandeli bamnyama, kungase kube nzima futhi kunzima kuwe ukuthumela nokuthola imilayezo evumelekile ngesikhathi esifanele. Ukuze uvimbele le nkinga, kufanele ususe labo bantu abangamnyama ngokushesha ngangokunokwenzeka. Okokuqala, kufanele uhlole abasebenzisi be-imeyili bese uthola ukuthi ngabe ungubani kulabo abanobumnyama noma cha. Uma lokhu sekuqedile, kufanele ulandele kanye nabathumeli noma amawebhusayithi abangezile kubalandeli babo bamnyama futhi wabaqinisekisa ngokusemthethweni wakho.
3. Gcina imibiko emihle yombhalo-kuya-Image:
Cela abathumeli bakho ukuthi balondoloze ama-ratios afaneleko wokubhala umbhalo kuya kwesithombe ngenkathi beklama futhi bakuthumela imiyalezo yabo. Ungathumeli izithombe eziningi ku-imeyili; Kunalokho, kufanele ube nenhlanganisela ephelele yemibhalo nezithombe. Siphakamisa ukuthi kuzo zonke ihluzo, kufanele usebenzise izithombe ze-JPG namavidiyo we-YouTube kuphela futhi ungathembi kwezinye izinhlobo zezinto.
Lezi zindlela ezintathu zizokusiza ukuqeda ama-imeyili ogaxekile. Ngesikhathi esifanayo, uzokwazi ukuthola imilayezo esemthethweni ngqo ebhokisini lakho lemilayezo engenayo futhi ngeke kudingeke uwathole kufolda yogaxekile noma ifolda yokudoba.